Daa'imman Siiriyaa keessaa baasuun waan biraaf itti fayyadamuu akka danda'an sodaatame - BBC News Afaan Oromoo
Daa'imman Siiriyaa keessaa baasuun waan biraaf itti fayyadamuu akka danda'an sodaatame
Qondaalli olaanaa Biyyoota Gamtoomani(UN) magaalaa Siiriyaa lolli marsee Damaasqootii daa'imman baafamuuf jedhan waan biraa argachuuf akka itti fayyadamaa jiran dubbatan.
Jilli addaa Biyyoota Gamtoomani(UN) Siiriyaatti ergame Jaan Iglaand BBC'f akka himanitti finciltoonni sababa daa'imman baafamanif hojjattoota mootummaa hidhaman gadilakkisuuf jedhu.
Dhukkubsattoonni 12 kaleessa kan baafaman yoo ta'u isa dura gaafa Kibxataa afur yaalaaf geeffamaniiru.
Dhukkubsattoonni 13 biroo immoo gaafa Kamisaa akka baafaman eegama.
Oduun daa'imman dhukkubsatan naannoo Bahaa Gootaa baasuun kan dhagahame erga gareen medikaalaa Siiriyaa Ameerikaa(Sams) tiwitarii irratti barreesse booda.
Garee kana keessa doktora ta'un kan tajaajilan Dr. Mohaammad Kaatub BBC'f akka dubbatanitti ummannii du'aa waan jiruuf eenyuun achii akka ba'u filachuun rakkisaa ta'eera.
''Namoota 29 qabanne keessaa ishiin dhumaa dubartiidha. Ganama kana ishii fudhachuuf haalli akka xumurame hojjattoonni maatii isaanii dubbisuu yeroo dhaqanitti intalli keenya guyyaa muraasa dura duute jedhan,'' jechuun dubbatan.
Ummanni kuma dhibba afur ta'u bulchiinsa Damaasqoo erga 2013 as waraana mootummaa jala jirtutti rakkatani jiru.
''Daa'imman hojjattoota gadhiisuuf yoo waliigalaniiru ta'e kuni waliigaltee gaarii miti. Ta'u hin qabu ture. Daa'immanis tajaajila fayyaa argachuuf mirga qabu nuyis isaan baasuuf dirqama qabna,'' jedhaniiru obbo Iglaand.
''Waraanni Siiriyaa gara caalu waraana tajaajila fayyaa balleessuuf taasifamudha. Hospitaalonni hedduu waraanota lamaaniinu barbadaa'aniiru. Doktoroonni fi narsoonni dhibba hedduu ta'an ajjeefamaniiru.''
Naannoon Bahaa Gootaa deeggartoota mootummaa Siiriyaa, Raashiyaa fi Iraanin akkasumas biyya mormitoota deeggartu Tarkiidhaan ''godina balaa hammaate xiqqeessuu'' jedhameera.
Haa ta'u malee, torban jaha dura lola finciltoonni kaasanif waraanni mootummaa waraanen lammiileen nagaa hedduu ajjeefamaniiru.
Hanqinni nyaataa, boba'aa akkasumas qorichaa jira. Qilleensi qorraammoo rakkinicha hammeessa jedhame sodaatameera.
Waraana Siiriyaa: Naannoo Baha Ghuwaataati dhukkubsattoota Wal'aansaaf baasuun eegalame
Waraana Siiriyaa: Eenyutu eenyuun waraanaa jira?
Tiraampi Ertiraa dabaltee lammiileen biyyoota Afrikaa afur Ameerikaa akka hin galle dhorkuuf